ओमिक्रोनले विशेषगरी यस्ता ठाउँमा गर्छ असर - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण विश्वमा त्रास फैलिरहेका बेला यसले फोक्सोमा धेरै हानी नगर्ने अध्ययन सार्वजनिक भएको छ । बेलायतमा ६ वटा अनुसन्धान समूहले गरेको अध्ययनले ओमिक्रोन भेरियन्टले फोक्सोमा कम असर गर्ने देखिएको हो । तर, घाँटीमा भने बढी असर देखिने गरेको युनिभर्सिटी अफ लिभरपुल मोलकुलर भाइरोलोजी रिसर्ज ग्रुपले प्रकाशित गरेको अध्ययनले देखाएको बेलायती अखबार द गार्जियनले जनाएको छ ।
युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका भाइरोलोजी प्राध्यापक दिनेन पिल्लेले अध्ययनमा ओमिक्रोन सङ्क्रमित बिरामीको फोक्सोमा कम हानी भएको पाइएको बताएका छन् । मुसामा गरिएको परीक्षण अध्ययनले अन्य भेरियन्टले भन्दा ओमिक्रोनले फोक्सोलाई १० प्रतिशत कम हानी गरेको पाइएको हो ।
ओमिक्रोन सङ्क्रमित मुसाको तौल खासै नघटेको तथा निमोनिया भए पनि सामान्य मात्र असर देखिएको खबरमा उल्लेख छ । यो भेरियन्ट नाक तथा घाँटीमा रहिरहने भएकाले खोक्दा, हाँछ्यु गर्दा छिटोछिटो अरु व्यक्तिमा सर्ने गरेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।
यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यहाँ डेल्टा भेरियन्टको तुलनामा ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमित बिरामीको ज्यान जाने जोखिम ८० प्रतिशतले कम छ । यसअघि, बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा निकायले आफ्नो प्रारम्भिक अध्ययनमा पनि अन्य भेरियन्टले भन्दा ओमिक्रोन कम घातक भएको जनाएको थियो ।
अध्ययनले ओमिक्रोन भएका झण्डै ७० प्रतिशत बिरामी अस्पताल भर्ना हुन नपर्ने देखाएको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले भने केही दिनअघि ओमिक्रोन अन्य भेरियन्ट भन्दा तीव्र गतिमा फैलिने भएकाले कोरोना सङ्क्रमणको सुनामी नै आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
यी हुन् फोक्सो क्यान्सरका कारण र लक्षण, कसरी बच्ने ?
यी हुन् ग्यास्ट्रिकका कारण, लक्षण र बच्ने उपाय
एकैदिन थपिए १,४४६ संक्रमित - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] ओमिक्रोनले विशेषगरी यस्ता ठाउँमा गर्… […]
नेपालमा कोरोनाको अर्काे लहर, के छ सरकारको तयारी ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] ओमिक्रोन भित्रिएसँगै केही दिनयता कोरोना […]
खोप नलगाएका समूहबाट नै कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट उत्पादन हुन्छ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] यो पनि…यी हुन् फोक्सो क्यान्सरका कारण र लक्षण, कसरी बच्ने ?ओमिक्रोनले विशेषगरी यस्ता ठाउँमा गर्… […]
ड्रयागन फ्रुट्समा कोभिड देखिएपछि सुपरमार्केट बन्द - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] यो पनि…जाडोमा छालाको हेरचाह कसरी गर्ने ?यी हुन् फोक्सो क्यान्सरका कारण र लक्षण, कसरी बच्ने ?ओमिक्रोनले विशेषगरी यस्ता ठाउँमा गर्… […]
यतिखेर देशभर चिसो बढ्न थालेसँगै सामान्यदेखि जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भन्दै चिसोबाट बच्न जनस्वास्थ्यविद्ले सुझाव दिएका छन्। जल तथा
कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर ओमिक्रोनको संक्रमण बढिरहेका बेला झापाका स्वास्थ्यकर्मीले १४ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। राष्ट्रिय
मुखबाट र्‍याल चुहिनुका कारण र रोकथाम
र्‍याल निस्कनु राम्रो हो किनकि र्‍यालले नै मुखलाई गिलो पार्छ। तर,कतिपय मानिसको चाहिनेभन्दा बढी नै र्‍याल आउँछ। उठेकोभन्दा सुतेका बेलामा